January 2022 - Channel Lover
January 31, 2022 by Channel Lover
မျက်ရည်ခိုင်မှဝင်ကြည့်ပါ…. ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်လေးရဲ့ Suprsie လုပ်ပီး အိမ်ကိုဝင် နှုတ်ဆက်ကန်တော့ခဲ့နေတဲ့မြင်ကွင်းလေးပေါ့…. မျက်ရည်ခိုင်မှဝင်ကြည့်ပါ…. ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်လေးရဲ့ Suprsie လုပ်ပီး အိမ်ကိုဝင် နှုတ်ဆက်ကန်တော့ခဲ့နေတဲ့မြင်ကွင်းလေးပေါ့…. မျက်ရည်ခိုင်မှဝင်ကြည့်ပါ…. ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်လေးရဲ့ Suprsie လုပ်ပီး အိမ်ကိုဝင် နှုတ်ဆက်ကန်တော့ခဲ့နေတဲ့မြင်ကွင်းလေးပေါ့…. မျက်ရည်ခိုင်မှဝင်ကြည့်ပါ…. ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်လေးရဲ့ Suprsie လုပ်ပီး အိမ်ကိုဝင် နှုတ်ဆက်ကန်တော့ခဲ့နေတဲ့မြင်ကွင်းလေးပေါ့…. unicode မကျြရညျခိုငျမှဝငျကွညျ့ပါ…. ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတပျဖှဲ့မှရဲဘျောလေးရဲ့ Suprsie လုပျပီး အိမျကိုဝငျ နှုတျဆကျကနျတော့ခဲ့နတေဲ့မွငျကှငျးလေးပေါ့…. မကျြရညျခိုငျမှဝငျကွညျ့ပါ…. ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတပျဖှဲ့မှရဲဘျောလေးရဲ့ Suprsie လုပျပီး အိမျကိုဝငျ နှုတျဆကျကနျတော့ခဲ့နတေဲ့မွငျကှငျးလေးပေါ့…. မကျြရညျခိုငျမှဝငျကွညျ့ပါ…. ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတပျဖှဲ့မှရဲဘျောလေးရဲ့ Suprsie လုပျပီး အိမျကိုဝငျ နှုတျဆကျကနျတော့ခဲ့နတေဲ့မွငျကှငျးလေးပေါ့…. မကျြရညျခိုငျမှဝငျကွညျ့ပါ…. ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတပျဖှဲ့မှရဲဘျောလေးရဲ့ Suprsie လုပျပီး အိမျကိုဝငျ နှုတျဆကျကနျတော့ခဲ့နတေဲ့မွငျကှငျးလေးပေါ့…. crd
ရွှေဘိုတက္ကသိုလ်တွင် တပ်စွဲထားသော စစ်ကောင်စီ စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို
ရွှေဘိုတက္ကသိုလ်တွင် တပ်စွဲထားသော စစ်ကောင်စီ စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို ဒရုန်းဖြင့် ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်(ရုပ်/သံ) ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၃၁ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ရွှေဘိုတက္ကသိုလ်တွင် တပ်စွဲထားသော စစ်ကောင်စီ၏ စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်နေ့ ညနေပိုင်း ဒရုန်းဖြင့် ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ကြောင်း Black Wolf-PDF က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီ ၂၅မိနစ်အချိန် ရွှေဘိုတက္ကသိုလ်တွင် တပ်စွဲထားသော စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို BLACK WOLF – PDF အဖွဲ့က ဒရုန်းတွင် ဗုံးသီးချိတ်၍ ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ကြောင်း၊ စစ်သားများ အထိအခိုက် အကျအဆုံး ရှိ နိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။ unicode ရှဘေိုတက်ကသိုလျတှငျ တပျစှဲထားသော စဈကောငျစီ စဈဆေးရေးဂိတျကို ဒရုနျးဖွငျ့ ဗုံးကြဲတိုကျခိုကျ(ရုပျ/သံ) … Read more
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အား လုပ်ကြံမည့်သူမှာ အများထင်သလို PDF များ မဟုတ်ဘဲ စကစ တပ်တွင်းမှသာ ဖြစ်မည်ဟု ဗေဒင်ပညာရှင်များ ဟော
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အား လုပ်ကြံမည့်သူမှာ အများထင်သကဲ့သို့ PDFများမဟုတ်ပဲ ၎င်း၏တပ်အတွင်းကသာ ဖြစ်ကြောင်း ဗေဒပညာရှင်၂ဦးကပြောကြားလိုက်သည်။ “မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ ဇာတာကိုဖတ်ပြီးပါပြီ၊ အခြားဗေဒဝိဇ္ဇာပညာရှင်တွေကလည်း သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ တွက်ချက်လေ့လာ သုံးသပ်ပြီးပါပြီ၊ သူဟာ လုပ်ကြံခံရဖို့ရှိနေပါတယ်၊ လက်ရှိ ဂြိုလ်သွားဂြိုလ်လာတွေအရရော သူ့ဇာတာခွင်အရရော အမျိုးမျိုး ဆန်းစစ်အဖြေရှာကြည့်ပြီးပါပြီ၊ သူဟာမကြာခင် လုပ်ကြံခံရတော့မှာပါ” “ထူးခြားတာက သူ့ကိုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မယ့်သူက အများထင်သလို PDFတွေမဟုတ်ဘူးဗျ၊ သူ့အနီးကပ် သူ့တပ်ကပဲ သူ့ကိုပြန် သတ်ဖြတ်လိမ့်မယ်လို့ ဗေဒနက္ခတ် ကျွမ်းကျင်သူတွေက သုံးသပ်ထားကြတယ်၊ ဒီဗေဒဟောကိန်းဟာလုံးဝမလွဲနိုင်ပါဘူးဗျာ”ဟု အမည်မဖေါ်လိုသူ ဝေဒပညာရှင်၂ဦးက ပြောကြားသည်။ Unicode ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျအား လုပျကွံမညျ့သူမှာ အမြားထငျသကဲ့သို့ PDFမြားမဟုတျပဲ ၎င်းငျး၏တပျအတှငျးကသာ ဖွဈကွောငျး ဗဒေပညာရှငျ၂ဦးကပွောကွားလိုကျသညျ။ “မငျးအောငျလှိုငျရဲ့ ဇာတာကိုဖတျပွီးပါပွီ၊ အခွားဗဒေဝိဇ်ဇာပညာရှငျတှကေလညျး သူ့နညျးသူ့ဟနျနဲ့ တှကျခကျြလလေ့ာ သုံးသပျပွီးပါပွီ၊ သူဟာ … Read more
အသံတိတ်သပိတ်မှာပြည်သူတွေအားလုံးပါဝင်ပူးပေါင်းပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလာတဲ့ လူရွှင်တော်ကြီး ဦးခင်လှိုင်
ပရိတ်သက်ကြီးရေ…ဟာသရုပ်ဆောင်ခင်လိူင်ဟာဆိုရင် ဟာသပိုင်းမှာရောဇာတ်ပိုသရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာပါ ပီပီပြင်ပြင်သရုပ် ဆောင်ပြီးပရိတ်သက်ကိုစွဲဆောင်နိူင်တဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟာသသရုပ်ဆောင်ကိုခင်လိူင်ဟာဆိုရင်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာဆိုရင်ပြည်သူနဲ့အတူပါဝင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်မလို့ စစ်တပ်ကလို က်ဖမ်းနေတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း ဦးခင်လှိုင်​က ပြည်သူတွေအားလုံးအသံတိတ်သပိတ်မှာပါဝင်ကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုက်ပြန်ပါပြီ။ ပရိတ်သက်ကြီးအနေနဲ့လည်း သရုပ်ဆောင်ခင်လိူင်ပြောတဲ့အတိုင်းအသံတိတ်သပိတ်မှာ ပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ် uniode ပရိတျသကျကွီးရေ…ဟာသရုပျဆောငျခငျလိူငျဟာဆိုရငျ ဟာသပိုငျးမှာရောဇာတျပိုသရုပျဆောငျတဲ့နရောမှာပါ ပီပီပွငျပွငျသရုပျ ဆောငျပွီးပရိတျသကျကိုစှဲဆောငျနိူငျတဲ့သူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။ ဟာသသရုပျဆောငျကိုခငျလိူငျဟာဆိုရငျဆန်ဒပွပှဲတှမှောဆိုရငျပွညျသူနဲ့အတူပါဝငျခဲ့တဲ့သူဖွဈတာကွောငျ့မလို့ စဈတပျကလို ကျဖမျးနတေဲ့သူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။ အခုလညျး ဦးခငျလှိုငျ​က ပွညျသူတှအေားလုံးအသံတိတျသပိတျမှာပါဝငျကွဖို့အတှကျတိုကျတှနျးလိုကျပွနျပါပွီ။ ပရိတျသကျကွီးအနနေဲ့လညျး သရုပျဆောငျခငျလိူငျပွောတဲ့အတိုငျးအသံတိတျသပိတျမှာ ပါဝငျပေးကွဖို့တိုကျတှနျးလိုကျရပါတယျ crd ပရိတ်သက်ကြီးရေ…ဟာသရုပ်ဆောင်ခင်လိူင်ဟာဆိုရင် ဟာသပိုင်းမှာရောဇာတ်ပိုသရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာပါ ပီပီပြင်ပြင်သရုပ် ဆောင်ပြီးပရိတ်သက်ကိုစွဲဆောင်နိူင်တဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟာသသရုပ်ဆောင်ကိုခင်လိူင်ဟာဆိုရင်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာဆိုရင်ပြည်သူနဲ့အတူပါဝင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်မလို့ စစ်တပ်ကလို က်ဖမ်းနေတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း ဦးခင်လှိုင်​က ပြည်သူတွေအားလုံးအသံတိတ်သပိတ်မှာပါဝင်ကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုက်ပြန်ပါပြီ။ ပရိတ်သက်ကြီးအနေနဲ့လည်း သရုပ်ဆောင်ခင်လိူင်ပြောတဲ့အတိုင်းအသံတိတ်သပိတ်မှာ ပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ် uniode ပရိတျသကျကွီးရေ…ဟာသရုပျဆောငျခငျလိူငျဟာဆိုရငျ ဟာသပိုငျးမှာရောဇာတျပိုသရုပျဆောငျတဲ့နရောမှာပါ ပီပီပွငျပွငျသရုပျ ဆောငျပွီးပရိတျသကျကိုစှဲဆောငျနိူငျတဲ့သူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။ ဟာသသရုပျဆောငျကိုခငျလိူငျဟာဆိုရငျဆန်ဒပွပှဲတှမှောဆိုရငျပွညျသူနဲ့အတူပါဝငျခဲ့တဲ့သူဖွဈတာကွောငျ့မလို့ စဈတပျကလို ကျဖမျးနတေဲ့သူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။ အခုလညျး ဦးခငျလှိုငျ​က ပွညျသူတှအေားလုံးအသံတိတျသပိတျမှာပါဝငျကွဖို့အတှကျတိုကျတှနျးလိုကျပွနျပါပွီ။ ပရိတျသကျကွီးအနနေဲ့လညျး သရုပျဆောငျခငျလိူငျပွောတဲ့အတိုငျးအသံတိတျသပိတျမှာ ပါဝငျပေးကွဖို့တိုကျတှနျးလိုကျရပါတယျ … Read more
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအတွက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံမှာ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု အယူအဆကို နားမလည်တာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ
သရုပ်ဆောင် ပတ်ထရစ်ရှာကတော့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက အနုပညာလောကထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိနေဆဲ မင်းသမီးတစ်လက်ပါပဲ။ နိုင်ငံခြားသူလေးတစ်ယောက်လို စွဲမက်ဖွယ်အလှနဲ့ ပရိသတ်ကြိုက်နှစ်သက်မှုအများဆုံးရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ပီပီ ကြော်ငြာတွေများစွာ လက်ခံရိုက်ကူးနေရတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာဟာ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ တရုတ်လူမျိုးပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ပတ်ထရစ်ရှာက 119 Store ရဲ့ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနေ့အတွက် ရိုက်ကူးပေးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံထဲမှာ အနက်ရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနက်ရောင်ဆိုတာ တရုတ်လူမျိုးတွေအတွက် မင်္ဂလာမရှိတဲ့အရောင်၊ နာရေးတွေမှာပဲအသုံးပြုတဲ့အရောင်ဖြစ်ပြီး အခုလိုနှစ်သစ်ကူးတဲ့ အချိန်မှာ ကံကောင်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အနီရောင်နဲ့ မင်္ဂလာရှိတဲ့အရောင် ရွှေရောင်ကိုသာ အသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ထရစ်ရှာကတော့ ကြော်ငြာအတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် တရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို နားမလည်တဲ့ Stylist နဲ့ စီစဉ်သူတွေရဲ့ ပေါ့လျော့မှုကြောင့် အခုလို ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ … Read more
အိပ်ယာထနောက်ကျပြီး ထမင်း မချက်မိလို့ အပြစ်ပေးခံနေရတဲ့ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့မှာ လူရွှင်တော်ဝိုင်းကျော်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်
အိပ်ယာထနောက်ကြပြီးထမင်းမချက်တဲ့အမှုကြောင့် အပြစ်ပေးခံနေရတဲ့ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့မှ လူရွှင်တော်ကိုဝိုင်းကျော်ရဲ့အပြစ်ခံယူနေတဲ့ (ရုပ်သံ) အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည် အိပ်ယာထနောက်ကြပြီး ထမင်းမချက်တဲ့အမှုကြောင့် အပြစ်ပေးခံနေရတဲ့ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့မှ လူရွှင်တော်ကိုဝိုင်းကျော်ရဲ့အပြစ်ခံယူနေတဲ့ အိပ်ယာထနောက်ကြပြီး ထမင်းမချက်တဲ့အမှုကြောင့် အပြစ်ပေးခံနေရတဲ့ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့မှ လူရွှင်တော်ကိုဝိုင်းကျော်ရဲ့အပြစ်ခံယူနေတဲ့ အိပ်ယာထနောက်ကြပြီးထမင်းမချက်တဲ့အမှုကြောင့် အပြစ်ပေးခံနေရတဲ့ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့မှ လူရွှင်တော် ကိုဝိုင်းကျော်ရဲ့အပြစ်ခံယူနေတဲ့ အိပ်ယာထနောက်ကြပြီးထမင်းမချက်တဲ့အမှုကြောင့် အပြစ်ပေးခံနေရတဲ့ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့မှ လူရွှင်တော်ကိုဝိုင်းကျော်ရဲ့အပြစ်ခံယူနေတဲ့ အိပ်ယာထနောက်ကြပြီးထမင်းမချက်တဲ့အမှုကြောင့် အပြစ်ပေးခံနေရတဲ့ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့မှ လူရွှင်တော်ကိုဝိုင်းကျော်ရဲ့အပြစ်ခံယူနေတဲ့ unicode အိပျယာထနောကျကွပွီးထမငျးမခကျြတဲ့အမှုကွောငျ့ အပွဈပေးခံနရေတဲ့ ဟားငါးကောငျအဖှဲ့မှ လူရှငျတျောကိုဝိုငျးကြျောရဲ့အပွဈခံယူနတေဲ့ (ရုပျသံ) အောကျဆုံးတှငျရုပျသံဖိုငျပါသညျ အိပျယာထနောကျကွပွီး ထမငျးမခကျြတဲ့အမှုကွောငျ့ အပွဈပေးခံနရေတဲ့ ဟားငါးကောငျအဖှဲ့မှ လူရှငျတျောကိုဝိုငျးကြျောရဲ့အပွဈခံယူနတေဲ့ အိပျယာထနောကျကွပွီး ထမငျးမခကျြတဲ့အမှုကွောငျ့ အပွဈပေးခံနရေတဲ့ ဟားငါးကောငျအဖှဲ့မှ လူရှငျတျောကိုဝိုငျးကြျောရဲ့အပွဈခံယူနတေဲ့ အိပျယာထနောကျကွပွီးထမငျးမခကျြတဲ့အမှုကွောငျ့ အပွဈပေးခံနရေတဲ့ ဟားငါးကောငျအဖှဲ့မှ လူရှငျတျော ကိုဝိုငျးကြျောရဲ့အပွဈခံယူနတေဲ့ အိပျယာထနောကျကွပွီးထမငျးမခကျြတဲ့အမှုကွောငျ့ အပွဈပေးခံနရေတဲ့ ဟားငါးကောငျအဖှဲ့မှ လူရှငျတျောကိုဝိုငျးကြျောရဲ့အပွဈခံယူနတေဲ့ … Read more
ဆီလာဖြည့်သူတိုင်းအား ချစ်စရာ ကောင်မလေးမှ အနမ်းလက်ဆောင်ပြန်ပေးသော ဝန်ဆောင်မူ့ ပေးတဲ့ ဆီဆိုင်
ဆီလာဖြည့်သူတိုင်းအား ချစ်စရာ ကောင်မလေးမှ အနမ်းလက်ဆောင်ပြန်ပေးသော ဝန်ဆောင်မူ့ ပေးတဲ့ ဆီဆိုင် ဓာတ်ဆီ ဆိုင် တော်တော်များသည် ဆိုင်သို့ ဓာတ်ဆီ လာဖြည့်သူ များအား ဝန်ဆောင်မှု အနေဖြင့် အအေးဘူးများကို ပေးဆောင်တတ်ပါသည်။ ယခုအခါမှာတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဓာတ်ဆီဆိုင် တစ် ဆိုင်၏ ဝန်ဆောင်မှုမှာ ထူးခြားစွာဖြင့် အမျိုးသားများ အနေနှင့် ချက်ချင်း ဆိုသလို ဓာတ်ဆီဆိုင်သို့ အမြန်ဆီ သွားထည့်ချင်စိတ် ပေါက်သွားနိုင် သည့် ဝန်ဆောင်မှုမျိုး ပေးထားပါသည် အကြောင်းမှာ ဝန်ဆောင် မှုအနေဖြင့် ဓာတ် ဆီဆိုင်သို့ လာရောက်၍ ဆီဖြည့်သူများ ကို ဆိုင်ဝန်ထမ်းအဖြစ် ခန့်အပ် ထားသော ချောမောလှ ပပြီး ချစ်စရာကောင်းသည့်မိန်းကေလးဆီမှ နူးညံ့သောအ နမ်းတစ်ပွင့်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါသည် ဒေသခံ အမျိုးသာြး … Read more
ကျောက်ဆည်မြို့ အထွက်လမ်းတွင် ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်များကို ဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေသော စစ်အုပ်စု အဖြစ်ဆိုး
ကျောက်ဆည်မြို့ အထွက်လမ်းတွင် ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်များကို ဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေသော စစ်အုပ်စု မိုင်းဆွဲခံရစကစ တစ်ဦး ခေါင်းပွင့်ကာ ပွဲချင်းပြီးသေပြီး မော်တော်ပီကယ်နှစ်ဦး မျက်နှာထိဟုဆိုv မန္တလေးတိုင်း ကျောက်ဆည်မြို့အထွက်အမှတ်(၁၄)တပ်အနီး၌ လမ်း သွားလမ်း လာများကို ဖမ်း ဆီးငွေညှစ်နေသော စစ်အုပ်စုကို ယနေ့ မနက်ပိုင်းတွင် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ စကစ တ စ်ဦး ခေါင်းပွင့် ကာ ပွဲချင်းပြီး သေပြီး မော်တော်ပီကယ် နှစ်ဦး မျက်နှာတွင် ထိခိုက်ဒ ဏ်ရာများ ရသွားကြောင်း ကျောက်ဆည်ခရိုင် ကာ ကွ ယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (K.D.D.F)က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ ယနေ့ ဇန်နဝါရီ(၃၀)ရက် မနက်(၁၁)နာရီခန့်က “ကျော က်ဆည်မြို့ မြောက် ဘက် (၁၄)စစ်တပ် အ နီးတွင် စစ်ကောင်စီ လက်ပါးစေ မော်တော်ပီကယ်နှင့် … Read more